Aqoonkaab Dadka guulaystay subixii maxay qabtaan ? | Aqoonkaab
Dadka guulaystay subixii maxay qabtaan ?
May 26, 2017Arrimaha bulshada
Maalinta ku bilaabmatay ma tahay maalin aad guul gaadhi kartid ama aad qorshe leedahay? maalin kasta sida ay noqonayso waxa go’aamiya subixi sida uu kuugu bilaabmo ,waxa muhiima in laga taxadaro waa inay ku bilaabmato maalin aanad garanyn bilowgeeda iyo dhamaadkeeda ,dabcan wax walba allihi ina uumay ayaa og laakin taas macnaheedu maaha inaad u noolaata sida xoolaha .
caadooyinka dadki guuleystay waxa laf dhabar u ahaa maaraynta bilowga maalintooda hadaba maxay qaban jireen?
maqaalkan waxaanu idiinku soo gudbinaynaa ficilada ugu muhiimsan ee subixi la qabto .
seexo waqti hore si aad u toosto waqti hore : waqti hore oo aad seexato waxay jidhkaaga siinaysa nasasho dhamaystiran ,sidoo kale waxay xoojinaysa awoodaada maskaxeed iyo jidheed . ka taxadir soo jeedka habeenki ama saama-laylka kaas oo dhibaato badan ku sababa jidhka halkan ka akhri saamaynta uu saama-laylku ku leeyahay jidhka RIIX HALKAN.
diinteena islaamka ayaa ina faraysa : inaad waqti hore toosta waa waajib maadama aynu oogeyno salaada subax ,salaada subax waxay ka mid tahay waqtiyada ugu dhow ee ducada ilaahay aqbalo .
samee jimicsi : jimicsiga subixi wuxu kala shaandheeya habdhiska wareega dhiiga , waxaanu toosiya wadnaha iyo muruqyada, sidoo kale waxa uu hagaajiya,dejiyaa xaalada nafsiyadeed, dabcan hawada saafiga ah ee subixi wax loo dhiga ma jiraan .
cab sharaabka liin macaan : haddi aad toosto adiga oo werwersan ama xaaladaada nafsiyadeed aanay deganayn waxa haboon inaad cabto liin macaanta , liin macaantu waxay ka kooban tahay maadada vitamin B6 iyo aashitada (acid) Folic kuwaas oo dawo ka ah werwerka dejiyana xaalada nafsiyadeed ee jidhka .
Useexo dhinaca midigta ah : iska ilaali inaad u seexato dhinaca bidixda maadama ay sababto wadne xanuun, cadaadisna ku samayso sambabada iyo caloosha . cilmi baadhayaal badan ayaa sheegey in dadka u seexda dhinaca midigta ah ay ku raaxaystaan hurdo nabadgelyo ah .
Deji qorshaha maalineed ee aad ku howl galayso : waa qodob muhiima ugu dambayn waa inaad samaysataa qorshihii aad ku maarayn lahayd maalinta cusub ee ku bilaabmatay ,waxaana ugu muhiimsan maaraynta waqtiga .qiimaha shanta daqiiqo ay leedahay oo aad garataa waa furaha guusha nolosha iyo aakhiraba.
adiga maalintaada maxaad ku bilaabtaa ?
xuquuqda maqaalkan :aqoonkaab.com
Previous PostCabitaano u fiican habdhiska dheefshiidka qofka Next Postfaaidooyinka caafimaad ee salaadda taraawixda
3 thoughts on “Dadka guulaystay subixii maxay qabtaan ?”
khalid cade August 27, 2017 at 4:16 pm
asc asxpta wepka aqoon kaab waxaan donayaa tarikhda dadka guuleystey inaad nosoo gudbeysaan
Khadar April 1, 2018 at 12:38 am
Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin. Waxaa website aad iyo aad muhiim inoo leg hadaan nahay umada soomaaliyeed.
Anonymous September 25, 2018 at 6:29 am
Qodobada ugu waweyn ee guusha